Search Engine Optimization SEO ဆိုတာဘာလဲ? | Myanmar Web Store
Search Engine Optimization (SEO) ဆိုသည်မှာ Search Engine (Google, Yahoo, Chrome, etc..) ပေါ်မှာ မိမိတို့၏ website ကို အခြားသော website များထက် ရှာဖွေရာတွင် လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် နည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ မိမိလုပ်ငန်းသည် fashion ပက်သက်သော website တခုတည်ထောင်ထားသည်။သုံးစွဲသူ users များက မိမိ၏ web address ကိုအတိအကျမသိသော်လည်း users များက browser’s search box ထဲတွင် fashion နှင့် ပက်သက်သော စာလုံးတစ်ခုခုအားရိုက်ထည့်လိုက်သောအခါ မိမိ website ကို ထိပ်ဆုံးက ကျလာအောင် ပြုလုပ်ပေးသော နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Web Store တွင် ထိုကဲ့သို့ SEO service စနစ်များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Related Articles- မိမိ Website ကနေ Android Application ပွောငျးနညျး
Like&Follow Our Facebook- Myanmar Web Store
SEO ( search engine optimization ) ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ website ကို SEO လုပ်ဖို့တာလဲ?" >